गोप्य रुपमा आलिया भट्ट र रणबिर कपूरले गरे इन्गेजमेन्ट ? - SangaloKhabar
गोप्य रुपमा आलिया भट्ट र रणबिर कपूरले गरे इन्गेजमेन्ट ?
एजेन्सी । बलिउड अभिनेता रणबिर कपूर र आलिया भट्टले गुपचुप रुपमा इन्गेजमेन्ट गरेको खबर यतिबेला चर्चामा छ । साथै आलिया र रणबिरले भारतमा नभइ स्वीट्जरल्याण्डमा इन्गेजमेन्ट गरेको बताइएको छ । रणबिर कपूरले आलियाका अगाडि घुँडा टेक्दै स्वीटजरल्याण्डको सेन्ट मोरिसमा प्रपोज गरेका चर्चा यतिबेला भइरहेको छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत्र २२, २०७५ समय: १६:२४:३५